Deg-Deg: Cabdi Iley oo lugta la galay godkii loogu tala galay. – Xeernews24
Deg-Deg: Cabdi Iley oo lugta la galay godkii loogu tala galay.
7. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararka inaga soo gaadhaya dalka Itoobiya waxay sheegayaan in madaxweynihii shalay xilka xooga looga tuuray ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Iley)ay ciidammada militariga federaalka Itoobiya la tageen.
Balse dad ku sugan Itoobiya ayaa inoo xaqiijiyay in Cabdi Maxamuud cumar la qabtay isagoo baxsi ah.
Ilaa hadda lama garanaaya halka ay u kaxaysteen ciidammada militariga Itoobiya balse warar hoose ayaa tibaaxay in diyaarad lagu ritay loolaana duulay xagga iyo magaalada Addis ababa ee xarunta dalka.
Shalay ayay aheyd markii madaxweynahii hore dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu xilka si qasab ah iska casilay.
Waxaa madaxweynaha cusub loo magacaabay Axmed Cabdi Sheikh Maxamed oo ay saxiib dhoow iyo qaraabo yihiin.
Dad ku sugan magaalada Jigjiga ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada kahor inta aysan soo qaban Cabdi Maxamuud ay dadka deriska ku amreen inay guryahooda ku xoraadaan, intaasi kadib ayay la soo baxeen Cabdi, iyaga oo si naxariis daro ah u jidh dilay, kadibna isaga oo jeebeysan kor ka saaray mid ka mid ah gawaadhidii ay wateen.
Suldaan Cabdullaahi Bashiir oo ka mid ah Odayaasha ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa sheegay in Ciidanka Millatariga Itoobiya ay si bani’aadanimo ka bax ula dhaqmeen Cabdi Maxamuud oo si xun ay u jidh dileen, islamarkaana ay u diuuliyeen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Wuxuu sheegay in magaalada Jigjiga uu ka bilwoday barakac aad u baalaadhan oo ay sameynayaan dadka yar ee ku hadhay magaalada, maadaama dadka qaarkood ay noqdeen kuwa la dilay iyo kuwa horey u cararay, markii ay bilowdeen rabshadaha ka taagan Jigjiga, Suldaan Cabdullaahi Bashiir ayaa ku baaqay in gurmad deg deg ah lala soo gaadho shacabka ku dhibaateysan magaalada Jigjiga ee sida xaq darada ah ay u leynayaan ciidanka Itoobiya oo adeegsanaya awood Millatari.
“Wallaalow waxaa ka socda Jigjiga wax la sheegi karo ma ahan, Ciidanka Millatariga Itoobiya oo tiro ahaan gaadhaya ilaa 6,000 oo askari ayaa isku geedaamay guriga Cabdi Maxamuud barkhadii maanta, kahor inta aysan kaxeysan ayay six un u jidh dileen, waxay u garaaceen si arxan daran, kadibna way kaxeysteen, magaalada dadkii ku noolaa waxay noqdeen kua cararay iyo kuwa la dilay, kuwa yar ee hadhayna hada ayay barakacayaan, waxaan codsaneynaa in gurmad lala soo gaadho dadkan.
Warar aan heleyno ayaa sheegaya in Madaxweynihii hore ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud loo duuliyay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasi oo Maxkamad lagu soo taagayo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/06/abdi_iley61.jpg 396 600 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-07 16:24:512018-08-07 16:32:33Deg-Deg: Cabdi Iley oo lugta la galay godkii loogu tala galay.
SAWIRRO: Cabdi Iley oo Ardaydiisi looga dhigey Madaxweynaha cusub ee Soomaalida... Saddex qodob oo soo dedejin kara in uu RW Abiy Ahmed ku guuldarreysto talada...